Hydroxypropyl methylcellulose bụ ihe na-emerụ ahụ mmadụ? Kedu ihe m kwesịrị ị paya ntị?
site ha na 20-03-11
Hydroxypropyl methylcellulose adịghị emerụ ahụ mmadụ, hydroxypropyl methyl cellulose adịghị mma ma ọ nweghị ọgwụ na-egbu egbu, enwere ike iji ya mee ihe dị ka nri, enweghị ọkụ, ọ nweghịkwa mgbakasị ahụ na akpụkpọ ahụ na kọntaktị akpụkpọ ahụ. Ohaneze na-ewere dị ka nchekwa nchekwa kwa ụbọchị nke 25mg / kg, prot ...
site na nhazi na 19-06-08
Redispersible ntụ ntụ Redispersible latex bụ ihe na-agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba nke na-agbanye site na ihicha. Ọ nwere ezigbo dispersibility na enwere ike re-emulsified n'ime anụ polymer emulsion mgbe ị gbakwunye mmiri. Ihe a rụpụtara bụ otu ihe ahụ ka emulsion izizi ahụ. Nke ...
Ngwa nke Redispersible Latex ntụ ntụ
site na nhazi na 18-03-18
Redispersible ntụ ntụ bụ ntụ nke etolite na-agbanye site na mmịpụta polymer emulsion, nke a na-akpọkwa roba ntụ ntụ. Enwere ike iwelata ntụ ntụ ngwa ngwa ka ọ bụrụ emulsion mgbe ịkpọtụrụ mmiri, ma na-ejikwa otu njikwa ahụ dị na mbụ emulsion, ya bụ, ihe nkiri ga-abụ mgbe mmiri kpochapụrụ…